Izibonelelo ezili-10 eziPhezulu zeZibonelelo zeGlutathione yoNyuso lwakho lweWisepowder
Izibonelelo zeGlathathione izinto eziphilayo ngeendlela ezininzi ngokusebenza njenge-antioxidant. Yinkomfa ye-amino acid ekhoyo kwiseli nganye yomntu. Yonke into ephilayo ine-glutathione emzimbeni wayo. I-antioxidant enamandla ethi xa ikho kumanqanaba afanelekileyo isikhusele kwiimeko ezinobungozi ezifana nesifo se-Alzheimer, isifo sentliziyo, kunye nokubetha.
Nangona le antioxidant iveliswa kwiiseli zemizimba yethu i-glutathione inokufakwa emzimbeni wethu, ifakwe ngaphezulu, okanye njenge-inhalant.
I-Glutathione yikhompiyutha eyenziwe ngokudityaniswa kwee-amino acid ezintathu: i-cysteine, i-glutamic acid, kunye ne-glycine, yi-antioxidant enamandla ethintela kunye nokulibazisa ukwaluphala kweeseli. I-Glutathione ithintela ukonakala kweeseli kwaye ichaze imichiza enobungozi kwisibindi kwaye iyakwazi ukuzibophelela kwizidakamizwa ukunceda umzimba ukuba uzenze lula. Ikwenza umsebenzi obalulekileyo wokwandisa ukungakhuseleki komzimba kunye nokulawula ukukhula kunye nokufa kweeseli emzimbeni wethu. Amanqanaba e-glutathione aqatshelwe ukunciphisa nokuguga.
1. Uxinzelela uxinzelelo lwe-oxidative
Xa ukuveliswa kweeradicals ngokukhululekileyo emzimbeni kwanda, kwaye nomzimba ungabi nako ukulwa nawo, oko kuphumela kuxinzelelo lwe-oxidative. Amanqanaba aphezulu oxinzelelo lwe-oxidative ashiya umzimba utsaleleka kwiimeko zonyango ezinesifo seswekile, isifo samathambo, kunye nomhlaza. I-Glutathione inceda ukunciphisa uxinzelelo lwe-oxidative olunceda umzimba kwiwadi yezigulo.
Amanqanaba aphezulu e-glutathione emzimbeni ayaziwa ukwandisa inqanaba antioxidants. Oku kunyuka kwee-antioxidants kunye ne-glutathione kunciphisa uxinzelelo lwe-oxidative.
2. Kwangathi kungaphuculwa impilo yentliziyo
I-Glutathione, kunye nokukwazi kwayo ukuthintela i-oxidization yamafutha emzimbeni womntu, inokunceda ukunciphisa iimeko zokuhlaselwa kwentliziyo nezinye izifo zentliziyo. Izifo zentliziyo zibangelwa kukuqokelelwa kwe-arterial plaque kwizibonda zodonga olungqiniweyo.
I-lipoproteins esezantsi-density lipoproteins (LDL), okanye i-cholesterol embi, ibangela i-plaque ngokonakalisa ii-linings zangaphakathi zemithambo. Ezi ziqhekeza ziyaqhekeza kwaye zinokuthintela imithambo yegazi, ukunqanda ukuphuma kwegazi nokubanga ukubetha kwentliziyo okanye ukubetha.
I-Glutathione, kunye ne-enzyme ebizwa ngokuba yi-glutathione peroxidase, ihambisa i-superoxides, i-hydrogen peroxide, i-radicals yasimahla kunye ne-lipid peroxide ebangela i-lipid oxidation (i-oxidation yamafutha). Oku kuthintela i-cholesterol embi ukuba yonakalise imithambo yegazi kwaye ngenxa yoko i-plaque. I-Glutathione ke inceda ukunciphisa umngcipheko wokuhlaselwa sisifo sentliziyo kunye nezinye izifo zentliziyo.
3. Ukukhusela iiseli zesibindi kwiziselo ezinesiselo esinxilisayo kunye namafutha
Xa kukho ukunqongophala kwee-antioxidants kunye ne-glutathione, iiseli zesibindi ezininzi zihlala zifa. Oku kunciphisa amandla kwesibindi sokulwa nesibindi esinamafutha kunye nezifo zesibindi esinxilisayo. IGlutathione, xa ikhoyo kumanqanaba aneleyo ithambekele ekunyuseni amanqanaba eproteni, i-bilirubin, kunye nee-enzymes egazini. Oku kunceda abantu ukuba bachache ngokukhawuleza kwizifo ezinamafutha kunye neziyobisi zesibindi.
Ukuphakama umthamo we glutathione Ilawulwa ngokukhuselekileyo kubantu abanesifo esinesibindi esinamafutha sibonisa ukuba glutathione lolona nyango luphambili kwesi sifo. Ikwabonisa ukwehliswa okukhulu kwealondialdehyde, uphawu lomonakalo weseli esibindini.
I-glutathione ehlelwe ngokomlomo ikwabonisa ukuba i-antioxidant inefuthe elihle kubantu abanesifo sesibindi esinamafutha angenasiselo sinxilisayo.
4. Inceda ukulwa nokunyuka kwamaxabiso
Ukunyuka kwemibhobho yesibeleko sesinye sezizathu eziphambili zezifo eziphambili ezifana nezifo zentliziyo, isifo seswekile, nomhlaza.
Ukwenzakala kubangela ukuba imithambo yegazi kwindawo eyonzakeleyo yandise ukuze kuvumeleke igazi elininzi ukuya kuloo ndawo. Eli gazi ligcwele ziiseli zomzimba ezitshabalalisa le ndawo ukuthintela naluphi na usulelo. Nje ukuba indawo yenzakeleyo iphilise, ukudumba kuyavuza kunye namaseli omzimba anciphise inani. Kodwa kumzimba ongenampilo ochatshazelwa luxinzelelo, iityhefu, ukutya okungenampilo, ukunyuka kwamaxabiso akuyi kuthoba ngokukhawuleza.
I-Glutathione inceda kwiimeko ezinje ngokunyusa amaseli amhlophe amajoni omzimba. Balawula inani leeseli ezimhlophe eziya kwindawo eyenzakeleyo kuxhomekeka kubungakanani bokunyuka kwamaxabiso.
5. Ukuphucula ukumelana ne-insulin
Njengoko sikhula amanqanaba e-glutathione kwimizimba yethu ehla njengoko imizimba yethu ivelisa kancinci kwaye incipha glutathione. Oku kubangela okuncinci ukutshisa kwamafutha emzimbeni wethu. Umzimba ugcina amanqatha amaninzi. Oku kukonyusa ukubonakala kwe-insulin.
Ukutya okunyusa amanqanaba e-cysteine ​​kunye ne-glycine kuyakonyusa imveliso ye glutathione emizimbeni yethu. Olu bukho bukhulu be-glutathione inceda ukumelana ne-insulin enkulu kunye nokutsha kwamafutha aphezulu.
6. Izigulana ezinesifo se-vasipheral yezifo zibona ukuphucuka kokuhamba
Isifo se-peripheral artery isifo sihlasela abantu abaneengxaki zemithambo-luvo. Esi sifo ikakhulu sichaphazela imilenze yomntu. Oku kwenzeka xa imithambo yegazi evaliweyo ingakwazanga ukubonelela ngegazi elifunekayo kwimisipha xa izihlunu ziyifuna. Umntu ngamnye ogula sisifo semithambo yoluvo uya kuva iintlungu kunye nokukhathala xa uhamba.
I-Glutathione, elawulwa ngokungena ngaphakathi kabini ngemini, yabonisa ukuphucuka okuphawulekileyo kwiimeko zabo. Abantu bebodwa bakwazile ukuhamba imigama emide kwaye abakhange bakhalaze nantlungu.
7. I-Glutathione yolusu
Izibonelelo zeGlutathione zikwandisa ukugcina ulusu olusempilweni kunye nokunyanga. Amachaphaza, ukomiswa kwesikhumba, i-eczema, imibimbi, kunye namehlo aqatha anokunyangwa ngethamo elifanelekileyo le-glutathione.
Ukusetyenziswa kweglutathione yolusu kuthintela i-tyrosinase, i-enzyme evelisa i-melanin. Ukusetyenziswa kweglutathione ixesha elide kuya kukhokelela kulusu olukhanyayo ngenxa yokuveliswa kwe-melanin engaphantsi. Ikwabonakalisiwe ukunciphisa i-psoriasis, ukuphucula ulusu, kunye nokunciphisa imibimbi.
8. Unciphisa iimpawu zesifo sikaParkinson
Ukudinwa yenye yeempawu abantu abaphethwe zizo Isifo sikaParkinson uhlala unesifo. Kungenxa yokuba esi sifo sihlasela inkqubo ye-nervous system. Ulawulo olungenayo ngaphakathi lwe-glutathione lubonakalise ukuphucuka kwabantu kwesi sifo. Unyango lwanciphisa ukungcangcazela kunye nokuqina kwizigulana eziphantsi koqwalaselo. Kukholelwa ukuba i-glutathione inokwenza ubomi bube lula kwabo banesifo sika-Parkinson ngokunciphisa iimpawu ezibonisa ukuba unesifo.
9. Inceda abantwana abazi-autistic ngokunciphisa umonakalo we-oxidative
Abantwana abane-autism baboniswa benomgangatho ophezulu wokonakaliswa kwe-oxidative ebuchosheni babo. Kwangelo xesha, amanqanaba e-glutathione asezantsi kakhulu. Oku kwonyusa umngcipheko wokuba abantwana baqhubeke nokonakala kwimithambo-luvo ngeekhemikhali.
Abantwana abanyangwa ngomlomo nangomqolo we-glutathione dosage babonisa ukuphuculwa okuphawulweyo kumanqanaba e-plasma sulfate, cysteine, kunye namanqanaba egazi glutathione. Oku kunika ithemba lokuba unyango lwe-glutathione lunokuphucula ukusebenza kwengqondo kwaye ke, ubomi babantwana abane-autism.
10. Inganceda ukulwa nezifo ze-autoimmune
Izifo ezizimeleyo zibandakanya isifo se-celiac, isifo samathambo kunye ne-lupus. Ezi zifo zibangela ukudumba okungapheliyo kunye nentlungu eyonyusa uxinzelelo lwe-oxidative. IGlutathione inokulawula ukuphendula komzimba ngokuchasene nokuyikhuthaza okanye ukuyinciphisa. Oku kunika oogqirha ukuba banciphise uxinzelelo lwe-oxidative kubantu abanengxaki yokuphazamiseka komzimba.
Izifo ze-Autoimmune zitshabalalisa i-mitochondria yeseli kwiiseli ezithile. I-Glutathione inceda ukukhusela i-mitochondria yeseli ngokulwa ne-radicals yasimahla. I-Glutathione inceda iiseli ezimhlophe kunye neeseli T ezilwa nosuleleko. Iiseli ze-T ezonyuswe yi-glutathione zabonisa amandla akongezelelekileyo okulwa ukosulelwa yintsholongwane kunye nentsholongwane.
Njengoko umzimba ukhula, amanqanaba e-glutathione emzimbeni ayancipha. Kufuneka sitye ukutya okuya kunceda umzimba ukuba ubuyisele amanqanaba e-glutathione. Kukho ukutya okuninzi okune-glutathione ngokwendalo okanye i-glutathione yokunyusa izakhamzimba.
Ukuya kude kokutya kwe-glutathione ukuya, iprotey ye-Whey ene-gamma-glutamylcysteine. Le yindibaniselwano ye-glutathione kunye ne-cysteine ​​eyenza kube lula ukuba imizimba yethu ihlukane nee-amino acid ezimbini. Zombini zi-antioxidants ezilungileyo.
· Ukutya kweAllium
Izongezelelo ezilungileyo ze glutathione kukutya okuvela kwizityalo ezikuhlobo lweAllium ezityebileyo zesalfure. Isalfure inceda imizimba yethu ukuba ivelise ngakumbi glutathione yendalo. I-anyanisi, igarlic, i-scallion, i-chives, i-shots kunye neeliks kukutya okuluhlobo lwe-allium.
· Imifuno yeCruciferous
Imifuno ecocekileyo inee-glucosinolates eziyonyusa amanqanaba e-glutathione emzimbeni wakho. Kungenxa yoko le nto izityalo eziphethe le mifuno zinuka kamnandi.
Iklabishi, ikholififera, i-broccoli, i-kale, bok choy, ibrussels ihlumela, i-arugula, rad radic, watercress, kunye ne-collard greens yonke imifuno ebethelelwa emnqeni.
· Ukutya kune-alpha-lipoic acid
Inyama yenkomo, inyama yenyama, isipinatshi, igwele le-bhiya, kunye neetumato zilungile izongezo ze-glutathione njengoko zityebile i-alpha-lipoic acid. Le asidi ivuselela kwaye iphinde inyuse amanqanaba e-glutathione emzimbeni wakho.
· Ukutya okutyebileyo eSelenium
Njengomkhondo we-mineral selenium inceda umzimba ukwandisa amanqanaba e-glutathione kunye nezinye i-antioxidants emzimbeni. Ukutya okune-selenium zii-oysters, ukutya kwaselwandle, amaqanda, amantongomane e-brazil, ii-asparagus, amakhowa kunye neenkozo zizonke.
Izongezelelo zeGlathathione beza ngeendlela ezahlukeneyo. Banokuthathwa ngomlomo. Kodwa i-glutathione ethathwe ngomlomo ayisebenzi xa iphinda ifezekise amanqanaba omzimba wekhompawundi.
Indlela ebhetele yokuthatha isongezelelo se-glutathione kukuthatha i-liposomal glutathione kwisisu esingenanto. Isithako se-glutathione esisebenzayo siqulathwe embindini wee liposomes. Ukuthatha le supplement ngomlomo yeyona ndlela ibhetele yokwandisa inqanaba lomzimba le-glutathione.
I-Glutathione inokufakwa ngaphakathi kwi-nebulizer ekhethekileyo. Kodwa kuya kufuneka unikwe amayeza
Iitranskri kunye neelensi ziyafumaneka ezinokusetyenziswa ngaphezulu. Amanqanaba abo okufotwa ayahluka kwaye ngamanye amaxesha unokungathembeki.
Ulawulo lwe-Intravenous yeyona ndlela ngqo yokuthatha i-glutathione ii-supplements. Yeyona ndlela ingenahlaseleyo.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeGlathathione
Ukuxhaswa kweGlutathione kuneziphumo ebezingalindelekanga. Oku kunokuvela ekuqhakaleni. isisu esiswini, igesi. izitulo ezivulekileyo, kunye nokuphendula okunokwenzeka kuzo zonke izinto. Kungcono ukubonisana nodokotela wakho ngaphambi kokuthatha ii-glutathione supplements.
Idosi ye-glutathione efunekayo emntwini inokwahluka kubudala bomntu, ubunzima, kunye ne-physiology. Inokuxhomekeka kwimeko yempilo yakhe nakwimbali yezonyango. Kungcono ukubonisana nogqirha wakho ukuba ajonge ukuba yeyiphi idosi yokuxhasa ekufuneka uyithathile.
I-Glutathione yimolekyuli ebalulekileyo kwimizimba yethu. Yinto enamandla i-antioxidant kwaye inceda umzimba ugcine itsheki kwi-radicals yasimahla. Oku kusigcina sisempilweni neewadi zezifo ezinjengeengxaki zentliziyo, umhlaza, kunye nokubetha kwentliziyo.
Kubalulekile ukugcina inqanaba elifanelekileyo le-glutathione kwimizimba yethu. Kukho iindlela ezahlukeneyo esinokukwenza ngazo oko. Singatya ukutya okutyebileyo kwe-glutathione, thatha i-glutathione ngomlomo, ukuyisebenzisa ngokuyintloko kungeniswa ngokulawulwa.
Funa ingcebiso ngonyango nangaliphi na ixesha uthatha isigqibo sokuthatha i-glutathione izongezo ukuze uguqule inqanaba lakho emzimbeni wakho.
URouhier N, uLemaire SD, uJacquot JP (2008). "Indima ye-glutathione kwizinto eziphilayo ze-photosynthetic: imisebenzi evelayo ye-glutaredoxins kunye ne-glutathionylation". Uphengululo lonyaka lweBiology Biology. 59 (1): 143-66.
UFranco, R .; ISchoneveld, OJ; IPappa, A.; IPanayiotidis, MI (2007). "Indima ephambili ye-glutathione kwi-pathophysiology yezifo zabantu". Oovimba abagcina iiphysology kunye neBiochemistry. 113 (4–5): 234-258.
2. Izibonelelo zeGlutathione
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-5.Glutathione